Xilka-qaadista Kulane Jiis oo lagu qarinayo kiis xasaasi ah | KEYDMEDIA ONLINE
Wuxuu Jen Cabdalla ugu baaqey qoyska Ikraan inuu dacwad ka furtmo Maxkamadda Ciidanka, si ay qabadhooda caadalad u hesho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa jira liis dheer oo ku qoran Saraakiil la dilay iyo kuwa maqan, oo lagu tuhmayo gacanta Kulane Jiis, waxaana ugu dambeeyay Ikraan Tahliil, oo bishii lasoo dhaafay la afduubay, illaa haddana nolol iyo geeri midna lagu haynin.
Kulane Jiis wuxuu ahaa shaqsi ku caan baxay dilalka qorsheysan, isagoo awood badan ku lahaa NISA, oo taliye ku xigeen ka ahaa, wuxuuna si dhaw ula shaqeynayay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, oo afartii sano ee lasoo dhaafay dalka u jiheeyay dhinaca digtatooriyadda.
"Fahad Yaasiin iyo Farmaajo waxaa lagu yaqaanay xasarad ku xaliyaan xasarad kale , waxay hadda rabaan inay Xil ka qaadista Jiis ka ku xaliyaan kiisaskii Saraakiisha la laayay ee NISA," ayuu yiri Jen Cabdalla Cabdalla, oo horey usoo noqday taliye ku-xigeenka hay'adda Nabad Sugida.
Wuxuu Jen Cabdalla kula taliyay qoyska Ikraan inuu dacwad ka furtmo Maxkamadda Ciidanka, si ay qabadhooda caadalad u hesho hadii la dilay, hadii ay nooshahayna dib loogu soo celiyo iyadoo bad-qabta.
Ikraan waxay xiir dhaw la lahayd Kulane Jiis, oo la sheegay in isaga iyo Fahad Yaasiin ay qorsheeyeen inay dilaan gabadhan, oo ahayd madaxa amaanka Internet-ka [Cybersecurity], ee NISA, waxayna xog badan ka haysay dilkii Eng Yariisow oo gacan yare u ahayd intii uu noolaa iyo dhalinyaradii loo diray Eritrea.
Waxay Fahad iyo Kulne Jiis kasoo celiyeen Ikraan dalka Ingiriiska oo waxbrasho u aaday markii Eng Yariisow la dilay 2019-kii, iyadoo soo baratay arrimaha Sirdoonka, waxaana looga shakiyay inay dowladda UK siiyay xog la xiriirta dilka duqii Muqdisho, oo haystay dhalashadda dalkaasi.